I-Huawei P10, isiphelo esiphezulu sefemu yaseTshayina ezandleni zethu | Iindaba zeGajethi
I-Huawei P10, isiphelo esiphezulu sefemu yaseTshayina ezandleni zethu
UJordi Gimenez | | Iiselfowuni, Reviews
NgoFebruwari ophelileyo Inkampani yeHuawei ibonise isiphelo sayo senkwenkwezi okanye kule meko, iiterminal zeenkwenkwezi: iHuawei P10 kunye neP10 Plus. Ngaphandle kwamathandabuzo sele sithethile kwizihlandlo zangaphambili ukuba ukuba nexesha lexesha lakho yinto elungileyo kwimarike enokhuphiswano njengaleyo yee-smartphones kwaye kulo nyaka iHuawei icebise ukubonisa iiterminal zayo ekuqaleni konyaka kwaye kwezona Umnyhadala obalulekileyo wokunxibelelana ngomnxeba kwihlabathi liphela, i-Mobile World Congress
Singatsho ukuba umjikelo wokuqala uphume ukusukela oko enye yezimbangi zenkampani ukuza kuthi ga ngoku, iSamsung, ingazisungulanga izixhobo zayo ezintsha ngezizathu esizaziyo sonke, nangona kuyinyani ukuba kuye kwafuneka ukuba ilwele ubugqwetha bayo kwi-MWC , IHuawei iyayazi indlela yokudlala amakhadi ayo ngokugqibeleleyo kwesi siganeko Kwaye kungekudala kudala yabhengeza ngomnye wabaphathi bayo ukuba kunyaka olandelayo bazakuphinda amava abo e-Barcelona, ​​beshiya ngasemva iintetho zabo ekupheleni kuka-Matshi nasekuqaleni kuka-Epreli.
Kodwa masibone ngokweenkcukacha isixhobo esitsha sikaHuawei, i-P10. Kule meko sonke siyazi ukuba zimbini izixhobo kodwa iHuawei P10 Plus ayikafikeleli ezandleni zethu ke siyathemba ukuba sinako "ukuyichukumisa" ngokucokisekileyo kwaye sabelane nawe ngokubonakala kwethu ngayo, ngelixa sibona zonke iinkcukacha, iinkcukacha kunye nezigqibo zemodeli yokungena kwiHuawei P10 entsha.
1 Uyilo kunye nezinto zokwakha
2 Ukucaciswa kweHuawei P10
3 Ikhamera ezimbini zeHuawei P10
Uyilo kunye nezinto zokwakha
Ngaphandle kwamathandabuzo ukuyilwa kwesi sixhobo yinto ephakamise ulindelo olukhulu kwaye emva kwayo yonke loo nto kufuneka kuthiwe iyalondolozwa, kodwa umbala wombala ongqindilili inokuba yindawo yokuqwalaselwa kunye nePantone ekhokelayo. Ngokubhekisele kuyilo lwayo, uninzi sele luthelekisile le Huawei P10 intsha evela ngaphambili kunye Xiaomi Mi5 kwaye ngasemva nge-Apple iPhone, kodwa sishiya ecaleni ukufana phakathi kweetheminali (into eqhelekileyo namhlanje) kufuneka sigxininise ukuba uyilo luhle ngokwenene.
IHuawei P10 yongeza utshintsho olumangalisayo, isivamvo somnwe sifikile kwi-smartphone kwaye oku kwenza abasebenzisi abaninzi, abalandeli benkampani, bathi balahlekelwe bubuntu kunye nabanye, ngelixa abanye beyibulela ngesizathu esilula sokuba xa Siza kuvula i-terminal ephezu kwetafile akuyomfuneko ukuyiphakamisa, ukongeza eli qhosha ngoku lidibanisa imisebenzi emininzi esinokuthi siyenze ngokwezifiso Susa amaqhosha okwenyani escreen usebenzisa imisebenzi yabo ye-capacitive.
Ngokubhekiselele kwi-chassis, yenziwe nge-aluminium kunye nokugqitywa kweglasi ngasemva apho Iikhamera ezimbini ze-20MP + 12MP zenziwe kunye noLeica, ukuba yi-12 (RGB) + 20 (monochrome) mpx, OIS, ezimbini ze-LED kunye ne-f / 2.2. SineapIsikrini esigcweleyo esingu-5.1 intshi Ijongeka ilungile ngokwenyani nokuba ifumana ukukhanya kwelanga kwaye kum ngokwaneleyo kwi-smartphone, eneefreyimu ezibhityileyo, ukujongeka okujikelezayo kunemodeli yangaphambili, i-P9 kunye iglasi 2.5D loo nto yenza ukuba ijikeleze ngakumbi eziphelweni ezibonelela ngokubamba ngcono kunye nemvakalelo xa uyibambe ngesandla esinye.
Ukucaciswa kweHuawei P10
Sele sithethile malunga nokubalulwa kwizihlandlo ezidlulileyo kwaye sijamelene nesixhobo esimangalisayo kwimodeli yokungena. Inegunya loku I-64GB yokugcina yangaphakathi iyandiswa ngekhadi le-MicroSD, ukongeza ekubeni ne-4GB ye-LPDDR4 yohlobo lwe-RAM kunye neprosesa yamva nje yenkampani, i-Kirin 960 Octa-core (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 & 4 × 1,8GHz Cortex-A53) ihamba kunye yi-GPU: Mali-G71 Mp8.
Malunga nonxibelelwano, sinayo yonke into, ukongeza kwizibuko elitsha Uhlobo C lwe-USB lokutshaja i-smartphoneIsinxibelelanisi I-3,5mm jack yeefowuni kunye nesizukulwane esitsha se-4G LTE 4 × 4 MIMO (ii-eriyali zomzimba ezi-4) ukuxhasa inethiwekhi ye-4.5G. I-2 × 2 i-Wi-Fi MIMO (ii-eriyali ezi-2) zokugubungela isantya esiphezulu ngaphandle kwamacingo, iBluetooth, iGPS kunye neGPS, i-OTG.
Isandi silungile kwaye isithethi sayo siyangxola, ngokuvakalayo nditsho. Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe isantya sokuvula isivamvo somnwe, oku kuyakhawuleza kwaye kuyasebenza, kwaye samangaliswa nangona i-Huawei ithathe inyathelo kakuhle kwiimvakalelo zalo zeminwe.
Ikhamera ezimbini zeHuawei P10
Eli lelinye lala macandelo anokuhamba kunye neenkcukacha kodwa kulungile ukwahlula iinkcukacha kuzo eyona nto inika umsebenzisi xa ethatha isithombe, ke masithethe ngabo kancinci. Yintoni ebonakalayo kubo kunye nekhamera ephindwe kabini ye-P9 okanye iMate 9 esele inayo le khamera iphindwe kabini isayinwe nguLeica, mhlawumbi imibala enamandla kakhulu into engafaniyo nabasebenzisi ngokufanayo. Ngaphambili, ukhetho longezwa ukuze iqela le-selfie liphume ngcono, livumela indawo yekhamera ukuba ivulwe ngakumbi xa abantu bongeziwe, into elula kodwa esebenzayo ukwenza iiselfies zibonakale ngcono.
IHuawei yangaphambili eneelensi ezimbini sele ithathe iifoto ngobunzulu bentsimi esivumela ukuba sibe nefuthe elaziwayo «bokeh». Ngale ndlela, sikholelwa ekubeni isenokungabikho umsebenzi omncinci ukuba sifuna ukuyithelekisa naleyo ye-iPhone 7 Plus, kodwa Enkosi ngokulungiswa kweposi kukaHuawei, iziphumo ezintle zinokufezekiswa. Siyazi ukuba uthelekiso alunakulunga, kodwa kuyacaca ukuba nabo bayenzile kwinkcazo-ntetho yabo kwaye nangona iziphumo ezifanayo zingafumanekiyo kolu hlobo lweefoto, zilungile. Iifoto zasebusuku azikho bhetele ngakumbi kunakwisizukulwana esidlulileyo, ke ngale ndlela ikhamera yeHuawei P10 iphucule ngendlela elungileyo ukufumana inqanaba elifanelekileyo ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo ixabiso lemali.
Kulungile, zonke ezi zinto zibalulekileyo zinamanani kwaye ayingowamanani nje, kodwa singatsho nyani Esi sixhobo siyakhawuleza, asikaze sichaphazeleke kwezi veki zimbini zokusebenzisa, iyakwazi ukuhlala usuku lonke kunye nebhetri yayo (3.200 mAh) nangona siqhuba imisebenzi emininzi kunye nesiphelo esifuna ubuninzi, kodwa ukuba ifudumala ngokusetyenziswa kakhulu, akukho nto yothusayo nangayiphi na indlela. Ke sinokuqinisekisa ukuba ngelixa kuyinyani ukuba imodeli yeHuawei P10 Plus yongeza ezinye iindlela ebesingathanda ukuzibona kule P10 intsha, njengokumelana namanzi okanye ibhetri enkulu, le P10 izimisele ukugudla amagxa kwaye iphumelele nge ii-smartphones ezinkulu esiza kuba nazo kungekudala.
Siphinda into esiyithethileyo ekuqaleni kwale post, ixesha lidlala indima ebalulekileyo kwaye i-smartphone iyafumaneka kwiintsuku ezi-2 kuphela (ithengisiwe ngo-Matshi 15) kwaye ukunikezela-eSpain- iHuawei Bukela i-2 kunye nokugcina kwangaphambili okufanayo, Benza inzuzo ngaphezulu kweentshaba zabo ngokuthathela ingqalelo ke siza kubona inqanaba lokuthengisa abaphumeleleyo ukusukela ngoku ukuza kuthi ga ngoku akukho nto ithethwayo malunga nokubhukisha.
Uphengululo lwe: UJordi Gimenez
Siluthandile utshintsho oluncinci loyilo
Ngokwenyani ngokukhawuleza isivamvo somnwe weminwe
Ubungakanani bomxholo we-Smartphone
Ukuphuculwa kokutshaja ngokukhawuleza
Isoftware elayishwe ngandlela ithile
Isikrini silungile, kodwa kunokuba ngcono
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Huawei P10, isiphelo esiphezulu sefemu yaseTshayina ezandleni zethu
Isamsung ayangezange isivamvo seminwe kwiscreen seGalaxy S8 ngenxa yokunqongophala kwexesha
Ixabiso kunye nokufumaneka kweNkulumbuso ye-Sony Xperia XZ